WEIRD တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အကျင့် (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ဒီအဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော။ Leonard Shlain MD ၏တွေ့ရှိချက်အရမည်သည့်သတ္တဝါသည်မှယောက်ျားလေးများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြိမ်ရေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာမရှိကြောင်းနှင့်ယနေ့အလေ့အထများ၏အကြံပြုချက်ကိုသမိုင်းအထောက်အပံ့ဖြင့်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ခွန်အား တစ်ဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်လူနေမှု၏ function ကိုထက်ပင်လူ့အပြုအမူဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခု Shlain ၏ကြေငြာချက်သည် WEIRD သို့သာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Cambridge တက္ကသိုလ်၏ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ သုံးသပ်ချက်ထုတ်ဝေသည် -ကမ်ဘာပျေါတှငျ weirdest လူတွေကို?သုတေသီများကသိပ္ပံပညာရှင်များသည်လူ့အကျင့်အကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်း၊ ပညာတတ်၊ စက်မှု၊ ချမ်းသာသောနှင့်ဒီမိုကရက်တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှနမူနာများကိုလုံးဝအသုံးပြုသည်။ ထိပ်တန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အပြုအမူများအကြောင်း 96% သည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၁၂% သာရှိသည်။
လက်တွေ့ကျကျအကြောင်းပြချက်များအတွက်, အများဆုံးမကြာခဏစုဆောင်းသောဘာသာရပ်များသည်ကျန်မျိုးစိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြေခံကျကျပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများတွင်နှစ်မြှုပ်နေသောအနောက်တိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်“ သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာဟာလည်းပုံမှန်မဟုတ်တာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ” (စ။ ၇၉-၈၀)
တကယ်ပါပဲ, အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားဘာသာရပ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတိုကောက်သည် MYOPICS - ရုပ်ဝါဒ၊ လူငယ်၊ မိမိကိုယ်မိမိအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်း၊ သူ၏အမြင်အရကျောင်းသားများထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည့်အရာများမှာ“သူတို့ရှင်းရှင်းအရှိဆုံးပုံမှန်ရွေးချယ်ဖိအားကနေဖယ်ရှားထားလျှင်အဘယ်အရာကိုလူသားမြားသညျကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ [အထူးသဖြင့်] လူ့အပြုအမူနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်ပုံမှန်ကန့်သတ်မှုများလျော့နည်းသွားသည့်အခါလုံးဝနိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ”
WEIRD လူ့အဖွဲ့အစည်း ၀ င်များသည်လူသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘူယျဖော်ပြရန်အနည်းဆုံးသောလူ ဦး ရေစာရင်းတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများက“ အထူးသဖြင့်ပါးလွှာပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ လူ့သဘောသဘာဝနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုသည်၊ လူသား၏အပိုင်းအစ။ "
ဤရှုထောင့်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်းထန်သောနှင့်မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြပါစို့။ မနုropဗေဒပညာရှင် Hewlett နှင့် Hewlett တို့ကထောက်ပြသည်။
ယူရို - အမေရိကန်လူ့လိင်စာပေစာတမ်းသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် [WEIRD] နိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစနစ်တကျနှင့်အသေးစိတ်လေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုရခြင်းကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ်မူထူးခြားသောအရာဖြစ်သော်လည်းလူအများစု၏တမူထူးခြားမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လူ့လိင်မှုဆိုင်ရာကောလိပ်ပြဌာန်းစာအုပ်တစ်အုပ်က“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးလူအများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သူတို့၏ဘ ၀ များတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်၎င်းတို့၏အတွက် Hewlett စာရွက်စာတမ်းအဖြစ် 2010 လေ့လာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအပါအဝင်အနောက်တိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံများ, Cross-ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Hewlett နှစ်ခုအာဖရိကအလယ်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့စိတျအပိုငျး၌ဤနိဂုံးချုပ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Aka မ Ngandu မတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသတိထားခဲ့သင်ယူဖို့အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏:
လိင်မှုကိစ္စများကိုရှင်းပြရန်နှင့်ဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားစဉ်သူတို့ကသူတို့ရယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရှက်တတ်သူဒါမှမဟုတ်ရှက်စရာကောင်းသူတွေလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကငါတို့သိခဲ့တာကြာပြီက Aka ကိုမထူးခြားဘူး။ …
ဒါဟာ Aka မှ Self-stimulation ရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကပုံမှန်မဟုတ်သောတွေ့ကအဝေးမှာကွန်ဂိုဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကမသိခဲ့ပါဟုဆိုသည်။ တစ်ဦးကတိကျတဲ့စကားလုံးကမတည်ရှိခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများကိုသူတို့လက်မထပ်မီသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုလွန်ပြီးသည့်နောက်မှမလိုက်နာသည့်အချိန်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းကိုမေးခဲ့ပြီးထိုအရာများမတွေ့ရှိရ … [အလေးပေးမှုထည့်သွင်းထားသည်]
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အခြားသစ်တောဒေသများတွင်လည်းရှားပါးသည်။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ Ituri သစ်တောရှိ Lese အမျိုးသားများထံမှကလေးမွေးဖွားမှုလေ့လာမှုများအတွက်သုတ်ရည်များစုဆောင်းရန်သူကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Robert Bailey ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူသည်အမျိုးသားများအားသုတ်ရည်နမူနာများမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုရှင်းပြရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူကရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးရှည်လျားသောညွှန်ကြားချက်များရှိသော်လည်းသုတ်ရည်နမူနာ ၃ ခုမှ ၃ ခုသည်သူ့ကိုယောနိချို့တဲ့မှုနှင့်ရောနှောစေသည်ဟုဆိုသည်။ စစ။ 113-114
Cross-ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းများ၏အမြင်တွင်, Hewetts လူ့လိင်၏ကောလိပ်ကျောင်း-ကျောင်းစာအုပ်ကိုယ်စားပြုဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဘဲလူသားများထက်လူလတ်တန်းစားယူရို-အမေရိကန် [လိုက်တယ်] ယဉ်ကျေးမှုမော်ဒယ်များများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ဦးစားပေးရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းသတိထား။ (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Watch အဆိုပါ easygoing Aka အကြောင်းကို။ )
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘူယျအားဖြင့်သတိရှိခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအခြားလှုံ့ဆော်မှုပြင်းထန်မှုနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပုံမှန်သာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုသင့်သည်။ WEIRD ၏လူ ဦး ရေသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ဘုံဖြစ်နိုင်သည် တိုးပွားလာအကြိမ်ရေ ယနေ့အစဉ်အမြဲဝတ္ထုနှင့် hyperstimulating အင်တာနက် porn ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ။ သို့သော်ထိုသို့သောမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူ့အပြုအမူ၏ကြီးမားသောအခြေအနေတွင်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာရှိ is တစ်လိုက်တယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ် "hypersexual desire" အတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဒါပေမယ့်တ ဦး တည်းကကြားဘူး။ စပ်စုလား? ၎င်းသည် "အသက် ၁၅ နှစ်ပြီးနောက်အနည်းဆုံး ၆ လဆက်တိုက် orgasm / ၇ ပတ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသည်။ "
သတိပြုသင့်သည်မှာ WEIRD sexologists သည်ပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအတွက်ဘားကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားနိုင်သည်ဖြစ်စေသူ၏ကြိမ်နှုန်းသည်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးမှ Ian Kerner ကယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကခန့်မှန်းခဲ့သည် ရာခိုင်နှုန်းပို 50 မှ 500 သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-နှင့်အတူအိပ်ခန်းထဲမှာဆိုးရွားသောဂယက်ရိုက်ခြင်းမရှိဘဲအလိုတခုတည်းထက်။ ကျွန်တော်တို့သည်လည်းယခုလုပ်နိုင်သူကို (ငယ်ရွယ်) ယောက်ျားအများကြီးထံမှစကားကိုနားထောငျ တစ်ခုစိုက်ထူမှသာရေရှည်တည်တံ့ အင်တာနက်က porn မှ masturbating နေစဉ်။
ကျန်တဲ့ကမ္ဘာ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်တွေအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးခြင်းကအကျိုးရှိနိုင်မလား။ တစ် ဦး တည်းသောလိင်အပြုအမူများပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိခြင်းကိုထောက်ပြ။ မည်သူ့ကိုမျှမရှက်ဘဲပြီးမြောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်လူ့အပြုအမူများပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနောက်ခံအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့မြင်ပါကပိုလျှံခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောမည်သည့်ပြofနာများ၏ရင်းမြစ်ကိုမဆိုပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတကလူတို့အားသူတို့ကိုယ်သူတို့ထူးဆန်းသည်ဟုမထင်ဘဲ၎င်းတို့အတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသောရွေးချယ်စရာများကိုစမ်းသပ်ရန်လူတို့အားအားပေးလိမ့်မည်။
(2020) ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အနောက်နိုင်ငံများတွင်အဘယ်ကြောင့်အလွန်ထူးဆန်းသနည်း သီအိုရီ
THE GUARDIAN သတင်းစာ IN ဆောငျးပါး
အာဖရိက Aka အမြိုးသားတို့သညျကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
အမျိုးသမီးများအမဲလိုက်စဉ်ကယောက်ျားများသည်ကလေးများကိုဂရုစိုက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့၏နို့သီးခေါင်များကိုပင်စုပ်စေခဲ့သည်။ Joanna Moorhead ကမနုropဗေဒပညာရှင် Barry Hewlett ကို Aka ကဘာကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောမိဘများဖြစ်သည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်
ဒီမေးခွန်းကအရစ္စတိုတယ်၊ ဒါဝင်နဲ့ကျွန်တော့်သုံးနှစ်သားလေးကိုပဟေinိဆန်စေတယ် - ယောက်ျားနို့သီးခေါင်းကဘာလဲ။ ယခုသီတင်းပတ်တွင်ဖခင်များအဖွဲ့မှလှူဒါန်းခြင်းသည်အဖြေမှန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်၎င်းသည်အာဖရိကမှမုဆိုးစုဆောင်းသောခြေသလုံးလူမျိုးစုနှင့်ပတ်သက်သောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အချို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ အဖြေသည်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်၏ (၃) နှစ်အရွယ် (နှင့်ဒါဝင်ကိုမျှတစွာ) သံသယရှိခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည်။ အထီးနို့သီးခေါင်းများသည်အမေအနီးအနား၌မရှိသောအခါနှင့် ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပျံ့နှံ့နေသော ၀ ါးပင်ကြီးရှိနေသည်။ စို့ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်တယ်။
ထိုအသင်စဉ်းစားသည့်အခါ, အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်မဟုတ်လော အကယ်စင်စစ်ကစားစရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်ရှိ၏သော်လည်းလစ်လပ်နေတဲ့အထီးနို့သီးခေါင်း, တစ်ဦး Dummy ဆိုခြင်းထက် ပို. သာယာနို့စို့အာရုံကိုပေးသည်။
ထိုအရာသည်အမေရိကန်မနု of ဗေဒပညာရှင်ပါမောက္ခ Barry Hewlett အားဗဟိုအာဖရိက၏ Aka Pygmy လူမျိုး (စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ ၂၀၀၀၀ ခန့်) တွင်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သူ (လူ ဦး ရေ ၂၀၀၀၀ ခန့်) ၏လမ်းစဉ်ကိုလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုအရာသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီးနီးကပ်စွာဘဝ။ မန်ချက်စတာပြည်နယ်မိခင်စောင့်ရှောက်ရေးမိခင်နို့တိုက်ခန်းတွင်ကလေးငယ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ဖခင်များကိုနို့တိုက်ကျွေးနေသည်ကိုသူသတိပြုမိချိန်တွင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Hewlett ကကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့တောရိုင်းလူမျိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့ Aka ဟာသူလက်ချိ့လေ့လာခဲ့ဖူးသူများကိုရိုက်နှက်တာကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်မှသူစတင်စုဆောင်းခဲ့သည့်အချက်အလက်များအရအေကာဖခင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၏အချိန် ၄၇% ကိုလက်လှမ်းမီနိုင်သဖြင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားယဉ်ကျေးမှုအစုအဖွဲ့များမှဖခင်များထက်ပိုများသည်။ Aka သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအဖေများဖြစ်သည်။
Aka နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမကဏ္rolesများသည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအမဲလိုက်စဉ်ကယောက်ျားများသည်ကလေးများကိုစိတ်ထဲထားကြသည်။ ယောက်ျားများသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်နောက်စခန်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ဟုအမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ပြီးတော့အပြန်အလှန်အားဖြင့် Hewlett ကဒီအပြန်အလှန်ပြောရရင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သတင်းဟာတည်ရှိနေတယ်။ “ Aka အသိုင်းအဝိုင်းမှာလိင်ခွဲခြားမှုကိုခွဲခြားထားတယ်၊ ဥပမာ၊ အမျိုးသမီးတွေကအဓိကစောင့်ရှောက်သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ဒါကအရေးပါတယ်၊ ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသိပ်မသိရသေးတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆင့်ရှိတယ်။ Aka ဖခင်များသည်မိခင်များအားဒုတိယအကြိမ်အတွေးမပါဘဲနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအဆင့်အတန်းပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲ - များသောအားဖြင့်မိခင်များလုပ်ကိုင်လေ့ရှိသောအခန်းကဏ္ into များသို့ပြောင်းသွားကြလိမ့်မည်။
အထူးသဖြင့် Aka ဘ ၀ ၏ဆွဲဆောင်အားကောင်းသောအသွင်အပြင်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနည်းတူအမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ရုံသာမကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အမဲလိုက်ခြင်းကဲ့သို့ပိုမိုကျွမ်းကျင်တတ်သည်။ ယခုအချိန်ထိအများအားဖြင့်အများအားဖြင့်အများအားဖြင့်ယူဆထားခြင်းမှာအမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်အမဲလိုက်ခြင်းသည်သမိုင်းအစဉ်အလာအရအထီးကျန်ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Hewlett သည်ကိုယ်ဝန်ရှစ်လတစ်လျှောက်ရှာဖွေ။ သူမ၌ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မွေးဖွားပြီးတစ်လအကြာတွင်သူမ၏ပိုက်ကွန်များနှင့်လှံများဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ အခြားမိခင်များမှာမူသူတို့၏သားကောင်ဖြစ်သည့် duiker (antelope အမျိုးအစား) သည်အန္တရာယ်ရှိသောသားရဲဖြစ်နိုင်သော်လည်းမွေးကင်းစကလေးများကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ချိတ်ထားခြင်းဖြင့်အမဲလိုက်ကြသည်။
အကယ်၍များ အားလုံးဟာအမျိုးသမီးရေးရာပရဒိသုလိုအသံထွက်ရင်၊ ပုံပြင်ထဲမှာပါ ၀ င်မှုရှိသည်။ Hewlett ကတာ ၀ န်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မျှဝေထားသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သော်လည်း Aka ဖန်မျက်နှာကျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူလေ့လာခဲ့သောရပ်ကွက်ရှိထိပ်တန်းအလုပ်များသည်အမျိုးသားများအတွက်သာဖြစ်သည် - kombeti (ခေါင်းဆောင်)၊ tuma (ဆင်မုဆိုး) နှင့် nganga (ထိပ်ရောဂါကုသသူ) အားလုံးသည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မိဘအုပ်ထိန်းမှုတွင်အတူတကွစောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်သူတို့၏အရေးပါသောထည့်ဝင်မှုမှမပါ ၀ င်နိုင်ပါ။ မျှတမှုကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေရသည့်အနောက်တိုင်းစုံတွဲများအတွက် Aka လူမျိုးများကသူယုံကြည်သောသတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ပါ။ ကလေးများအားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊
Hewlett က“ Aka နှင့်ပတ်သက်သောအချက်မှာဖခင်များသည်တက်ကြွစွာပါဝင်မှုသည်သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၏တစ်ခုတည်းသောကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုချဉ်းကပ်နည်းနှင့်၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်သမျှအရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုအပေါ်ထားခြင်း၏အရေးပါမှုဖြစ်သည်။ သုံးလခန့်တွင်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်သူမမိဘတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နီးပါးရှိသည်။ စုံတွဲတစ်တွဲသည်သူတို့၏ကလေးကိုဂရုမစိုက်ဘဲနေခြင်းမှထွက်ခွာသွားခြင်းသည်မကြားဖူးသောကြောင့်ကလေးများအားတစ်ချိန်လုံးထိန်းထားနိုင်သည်။ Aka ဖခင်များသည်ရင်ဘတ်နှင့်ကလေးနို့သီးခေါင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသောအရက်ဆိုင်နှင့်ညီမျှသည့်အရက်ဆိုင်သို့ပင်သွားရန်မရည်ရွယ်ပါ။ Aka tipple, စွန်ပလွံစပျစ်ဝိုင်, သည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ကလေးငယ်များကိုလက်မောင်းများကိုင်ထားသောယောက်ျားအုပ်စုတစ်စုမှနှစ်သက်သည်။
၎င်းသည်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အလွန်ဝေးကွာလှသည်။ Hewlett ကဒီမှာဖခင်တွေအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်တာကသူတို့ကလေးတွေနဲ့အချိန်မကြာခဏ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မရှိခြင်းပဲ “ ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအဖေတွေဟာအမြဲတမ်းနေရာမရှိနိုင်ဘူး၊ မင်းရဲ့ကလေးနဲ့အချိန်အများကြီးပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့နဲ့အတူအရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့အချိန်တွေရှိခြင်းအားဖြင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုသင်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကြီးမားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ “ ဒါပေမယ့် Aka မှာနေထိုင်ပြီးနောက်ငါဒီမျဉ်းကြောင်းရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသံသယဝင်မိတယ်။ ငါထင်တာကတော့ဖခင်တွေလိုအပ်တာကသူတို့ကလေးတွေနဲ့အချိန်အများကြီးပိုကြာတယ်၊ သူတို့ဟာအခုအချိန်မှာလုပ်တာထက်အများကြီးပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ထားဖို့လိုတယ်။ ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်ဖခင်များအနေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောပံ့ပိုးမှုများများစွာရှိပါသည်။ သို့သော်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်ကျပ်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးမထားသင့်ပါ။
၎င်းသည် Aka သည် Hewlett ၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုအတွေ့အကြုံမှရရှိခဲ့သည့်အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကသူက ၁၃ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်ကြားကလေးခုနစ်ယောက်၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ့ဘဝနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပုံသွင်းပေးခဲ့သည်၊ သူတို့ကြီးပြင်းခဲ့ကြအဖြစ်အများကြီး။ သူသည် Aka ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သူ့အားပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖခင်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါတို့အားလုံး၊ မိခင်များ၊ ဖခင်အားလုံးအတွက်ပါ၊ Aka သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကလေးများသည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်၎င်းတို့အားရရှိခြင်းသည်မည်မျှဖြစ်သည်။ ဒါကနည်းနည်း schmaltzy ကောင်းကောင်းထင်ရင်တော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လိုတယ်။ Hewlett ကပြောတာကငါတို့ကလေးတွေဟာကောင်းချီးတွေထက် ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးတွေမဟုတ်ဘဲဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။ "Aka မှ, သင်၏ကလေးများသင်၏အသက်တာ၏အလွန်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ ကလေးတစ် ဦး ကို ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ်ယူမှတ်ခြင်းသည်နားမလည်နိုင်ပါ။ ကလေးများသည်စွမ်းအင်၊ ရပ်ရွာ၏ဘ ၀ အင်အားဖြစ်သည်။ သူလေ့လာခဲ့သည့်အခြားလူမျိုးစုမှဖူလာနီကပြောကြားသည်မှာသင့်ကိုစိတ်ညှိုးငယ်စေမည့်သူတစ် ဦး ရှိလျှင်သင်ကံကောင်းသည်ဟုသူတို့ပြောကြသည်။
သို့သော်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုသို့ပြန်သွားသည့် - ဖခင်များအဖွဲ့ချုပ်မှ Jack O'Sullivan ကလူသိများသောအစီရင်ခံစာအပြီးတွင်တနင်္လာနေ့တွင် chat show ပြီးနောက်သူသည် chat show တွင်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းဖြစ်ပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ရာ၊ ဖခင်အချို့ကသူတို့ရင်သွေးငယ်များကိုနို့စို့စို့စေခိုင်းသည်။ ဖုန်းကိုရင်ဘတ်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းရင်းမကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။ သို့သော်အချို့လူများကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည် -“ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှု” ဟူသောစကားလုံးများသည်တစ်ကြိမ်ထက်မကပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကို Aka ရိုးရာသို့ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများအားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည် (ကလေးများ) ဥပမာအားဖြင့်မိဘများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းတစ်ခန်း၌တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရန်ထားခဲ့ခြင်း။
O'Sullivan အဖို့, ဝမ်းနည်းစရာမှာ Aka ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်မှုသည်ဖခင်နှင့်သူတို့၏မွေးကင်းစကလေးငယ်များအကြားဆက်ရှိနေသည့်အဆင်မပြေမှုကိုထောက်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ မိခင်နှင့်ရင်သွေးငယ်များသည်အလွန်လူသိများပြီးဂုဏ်ပြုခံရချိန်တွင်ဖခင်နှင့်ကလေးရင်းနှီးမှုများမှာမူဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများအရဖခင်များသည်သူတို့၏အချက်ပြချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့တွင်မိခင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းနိုင်ကြောင်းပြသထားသည့်အထောက်အထားများတိုးများလာနေသော်လည်းစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အိုစလီဗန်ကအမျိုးသားတွေဟာကလေးငယ်တွေ၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိမှာကိုကြောက်ကြတယ်။ Aka အတွေ့အကြုံကိုကိုးကားပြီးဒီကြောက်ရွံ့မှုကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရင်အသုံးဝင်ပြီးလွတ်မြောက်စေတဲ့အထီးအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်တယ်။
· barry Hewlett Hunter စုဆောင်းကလေးဘဝ (Aldine ငွေသွင်းငွေထုတ်) ၏ပူးတွဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။